KUN HABEEN IYO HABEEN QEYBTII 8-aad: Caawo iyo Sheekada Xiisaha Ay Leedahay | Filimside.net
Home » Kun Habeen iyo Habeen » KUN HABEEN IYO HABEEN QEYBTII 8-aad: Caawo iyo Sheekada Xiisaha Ay Leedahay
Waxay qeybtii hore noo mareysay markuu Xakiim Rooyaan uu soo galay Magaaladii uu Boqor Yoonaan ka talinayay isla markaasna uu ogaaday in boqorka baras uu qabo wax daawo ahna loo waayay.
Markaas ayuu xakiim Rooyaan utagay boqorkii wuxuuna ku yiri Boqoroow waxaan awoodaa inaan ku Daaweeyo anigoon wax daawo ah ku siinin wax dufan ahna kuu marinin,
Boqorkii arintaas aad ayuu ula yaabay wuxuuna yiri haddii aad sidaad sheegeyso sameyso waxaan ku siin doonaa intii noloshaada ka dhiman wixii aad ku noolaan laheyd waana ku sharfi doonaa waxaadna markasta ii ahaan doontaaa mid aad iigu dhaw, markaas ayuu xakiim rooyaan yiri waxaan rabaa in teendho la ii dhiso adigana bari adoo diyaarsan waxaad imaaneysaa barxada beertaada.
Xakiimkii wuxuu sameeyay markii Teendhadii la sameeyay ayuu wuxuu meesha keenay kubad aad uyar iyo ul asigoo daawooyin kala nooc ah mariyay, subaxii markii lagaaray ayaa waxaa yimid boqorkii oo ay la socdaan madaxdii Dowladiisa sida waziiradii saraakiisha ciidanka abaan-duulayaashii iwm, markaas ayuu xakiim Rooyaan usheegay boqorka in usha qabsado oo kubadana uu ku garaaco intii awoodiisa ah,
Maanta dhana uu sidaas sameeeyo wuxuuna ku dhahay markaad dareento in dhidid kaa yimid dhiigaagana kacay waad ordeysaa waxaadna tageysaa Musqusha si dag-dag ah ayaadna u qubeysaneysaa kadibna waad seexaneysaa.
Boqorkii sidii ayuu sameeyay siduu kubadii marba intii awoodiisa ah utuurayay ayuu dhididi badan ka imaaday wuxuuna xakiimkii boqorka u ishaaray inuu musqusha aado, sidii ayuuna ku aaday wuuna soo qubeystay asigoona seexday ilaa waabarigii.
Subaxii markuu soo kacay ayuu boqorkii muraayada isku fiiriyay balse tan cajiibka leh waxay aheyd inuu noqday qof Saliim ah oo aan haba yaraatee wax Baras ah laheen.
Boqorkii arintaas aad ayuu ugu farxay wuxuuna uwacay Xakiimkii asigoo soo dhaweystay wuxuuna siiyay hadiyado aad ubadan lacag iyo wax yaabo kale, wixii Maalintaas ka dambeeyay markasta oo xakiimka boqorka utago wuxuu siin jiray waxyaabo muhiim ah oo uu xitaa siini jirin kuwa dowlada ugu sareeyo, Nimco kasta oo banii aadam lasiiyo waxay leedahay xaasid waxaana midaas aad uga xumaaday midkamid ah wasiiradii boqorka kaasoo dareemay in boqorka dhanka xakiimka ujanjeero asigoo aad uga maseeray, sidaas darteed wuxuu go,aansaday inuu xakiimka ka takhaluso.
Wuxuu utagay Boqorkii wuxuuna ku yiri “boqkeygiiyoow adiga waxaad tahay qof dadka wanaajiya inaan kuu naseexeeyana waa igu waajib, sidaas darteed arin ayaan rabaa inaan kaala hadlo. hadii aad fasax iisiiso waan kuu sheegayaa,
Markaas ayuu boqorkii hadalkaas inta dhibsaday yiri ” waa maxay naseexadaada?”
Wasiirkii wuxuu yiri ” Boqorow Dadkii hore waxay dhaheen qofkaan waxa soo socdo ogeyn waxa joogo magaran karo, waxaana dareemay in boqorka uu cadowgiisa wanaajinayo halkii uu ka takhalusi lahaa anigana waan kuu cabsanayaa”
Markaas ayuu boqorkii yiri asigoo aad uxanaaqay waa kuma qofka cadowga igu ah ee aan wanaajiyay??
wuxuu wasiirkii yiri “Boqorkeygiiyoow hurdada ka kac aniga xakiim rooyaan ayaan kahadalayaa”
Markaas ayuu boqorkii yiri ” miyaad waalatay xakiimkaan waa ninkii idaaweeyay wuxuuna ii sameeyay waxa ay dadka dhan ka caajiseen, waana kuu jeedaa oo waad ka maseersantahay ee iimaankaaga sugo oo odaygaas miskiinka ah faraha ka qaad, mise waxaad rabtaa inaan dilo xakiimka kadibna aan ka shalaayo siduu ushalaayay boqor sindiyad markuu iska dilay shimbirtiisii??”
Markaas ayuu wasiirkii dhahay oo sidee kudhacday midaas??
Markaas ayay Shaharzaad dareentay in subaxii lagaaray weyna joojisay sheekadii.
Markuu wasiirkii weydiiyay sheekadii boqor sindiyaad iyo shimbirtiisii ayuu boqorkii hadalka ku bilaabay:
Waxaa jiray boqor kamid ah Boqoradii reer Faaris, kaasoo aad ujeclaa safarka iyo ugaarsiga wuxuu kaloo jeclaa tamashlaynta iyo dalxiiska, Boqorkaas wuxuu lahaa shimbir uu aad ujeclaaa meelkastana uraaci jirtay.
Maalintii dambe ayaa waxaa dhacday in boqorkii ugaarsi ubaxay kadibna waxay arkeen Deero, markaas ayuu boqorkii Askartiisii ku yiri afarta dhinac halaga soo maro qofkii ay dhinaciisa ka fakatana ha ogaado inaan kurka ka goyn doono.
Markaas ayaa deeradii la hareereyay kadibna waxaa dhacday in deeradii dhinaca boqorka aaday oo ayna ka baxsatay, markaas ayay askartii is fiifiiriyeen oo hoosta war ka sheegeen, kadib ayuu boqorkii wasiirkiisii uwacay kuna yiri maxay leeyihiin?
markaas ayuu wasiirkii yiri waxay leeyihiin inaad adiga dhahday qofkii ay dhinaciisa Deerada ka baxsato in kurka laga goynaayo.
Markaas ayuu boqorkii yiri waxaa igu ballan ah inaan keeno kadibna asiga iyo faraskiisii iyo Shimbirtii ayaa baxeen wuxuu socdoba wuxuu arkay Deeradii wuxuuna sii daayay Shimbirtii taasoo iyadana indhaha kaga dhagtay deeradii si uu boqorka uqabto.
kadib ayuu boqorkii deeradii qabtay markaas ayuu qalay oo maqaar siibay wuxuuna soo qaatay maqaarkeedii iyo madaxeedii.
Waqtigana wuxuu ahaa mid aad ukulul cabaar markey socdeen ayay oon dareemeen markaas ayuu boqorka hareeraha fiiriyay wuxuuna arkay geed ay biyo kasoo burqanayaan.
Markaaas ayuu boqorkii ubadiisii lasoo baxay oo biyihii ku shubay wuxuuna damcay inuu cabo hasa yeeshee waxaa kusoo booday shimbirkii oo ka daadiyay, markas ayuu boqorkii isdhahay asigaa aad u oomanee bal sii, biyihii ayuu markale soo shubay oo uu shimbirkii hoos dhigay balse shimbirkii biyihii ayuu daadiyay, kadibna ayuu boqorkii oo yaaban mar sadaxaad soo shubay oo faraskii siiyay, balse waxaa markale daadiyay shimbirkii.
Markaas ayuu boqorkii aad uxanaaqay asigoo shimbirka ku qeyliyay wuxuuna dhahay wlhi hadaad markaale daadiso seeftaan ayaan kula dhacayaa, wuxuuna soo shubtay biyihii asigoo cab isleh ayaa hadana waxaa daadiyay shimbirkii.
Markaas ayuu Boqorkii xanaaqay oo shimbirkii seeftii ku dhufty dhulkana kudhacay, balse wuxuu arkay boqorkii shimbirkii oo madaxa wax ugu ishaarayo asigoo nafta kasii baxayso sida inuu leeyahay geedka korkiisa fiiri, markaas ayuu boqorkii geedka korkiisa fiiriyay mise waxaaba saaran abeeso aad uqaro weyn waxaan shubmayana waa sunteedii.
Markaas ayuu boqorkii aad uga shalaayay iskana ooyay shimbirkiina halkii ku dhintay.
Marka Wasiirow ma waxaad rabtaa inaan noqdo sidii Boqorkaas oo aan dilo ninkii Daaweeyay kadibna hadhow ka shalaayo??
markaas ayuu wasiirkii yiri Boqorkeygoow aniga hadal kasta oo aan kudhaho inuu sax yahay gadaal ayaad ka ogaan doontaa hadii aad hadalkeyga iga yeesho waxaa laga yaabaa inaad bad-baado, balse hadaad taladeeyda iga diido oo aadan ka takhalusin xakiim rooyaan waxaad u halaagsami doontaa sidii uu uhalaagsami rabay amiirkii ugaarsiga jeclaa.
markaas ayuu boqor yoonaan yiri oo maxay aheyd sheekadii amiirkaas .
Markaas ayuu wasiirkii hadalkiisa ku bilabay : boqoroow waxaa jiray boqortooyo waa hore jiri jirtay,
boqorka ka taliyana wuxuu dhalay wiil kaasoo aad ujeclaa ugaarsiga.
Maalintii dambe ayuu ugarsi ubaxay kadib ayuu wadadii ka dhumay asigoo jidka kaligiisa socda ayuu wuxuu arkay gabar jaariyad ah oo jidka kaligeeda fadhiso markas ayuu wareystay waxayna usheegtay iney la socotay safar qoyskeeda ahaa oo ayna ka dhuntay una baahantahay inuu caawiyo .
Markuu hadalkeeda maqlay ayuu naxariis dareemay wuxuuna go,aansaday inuu caawiyo wuuna sii waday ilaa ay kasoo gaareen meel xeeb ah oo bada udhow, markaas ayay ku tiri inta wax yar igu sug xaajo ayaan soo gudanaa.
kadib ayay ka tagtay lkn iyadoon ogeyn ayuu soo daba kacay balse yaabka waxay aheyd markuu arkay iyadoo caruur la joogto kuna dhaheyso ” waan idiin imid waxaana idiin keenay wiil aad ucayilan”
markii amiirkii hadalkii maqlay ayuu aad unaxay naftiisana ubaqay, asigoo isla markiiba faraskiisii kusoo dhacay meeshiina kasoo cararay oo uu sidaas ku bad-baaday.
marka boqorow waxaan ka baqaa in sidii wiilkaas amiirka ahaa ee gabadha jaariyada dad cunka aheyd uu caawi isdhahay u haligi gaartay inuu adna xakiim rooyaan maanta saasoo kale kuu haligo, waxaadna ogaataa in ninkaan maanta shey aad qabatay haduu kugu daaweeyo uu barina shey aad urisay kugu dili karo waxaana laga yaabaa inuu yahay jaajuus ay cadowgaaga kuusoo direen si uu kuu dago ee aniga waan kuu naseexeyne ka takhalus.
Markaas ayuu boqor yoonaan yiri wallee waa runtaa oo hadii maanta shey aan taabtay igu daaweeyay waa macquul in barina shey aan uriyay uu igu dilo, waxaana laga yaabaa sidaad sheegtay inuu jaajuus yahay.
Waxaa Aqrisay 3,250
7 Responses to KUN HABEEN IYO HABEEN QEYBTII 8-aad: Caawo iyo Sheekada Xiisaha Ay Leedahay
First one Ayaan Caawa Noqday Mahadsanidiin Zxpayaal Wlhi Aad baan uga Helay Qisadan
RUNTII WAA SHEEKO LAYAAB LEH SAMIRKEEDUNA ADAGYAHAY INAD SUGTO HABEENKA XIGA.
Sahip mahadsanid inaba caadi maahin.
fadlan waxad kale oo no turjuntaan seven voyages of zinbad
fadlan adinkoo mahadsan sheekada folder gooniya u sameeya waa iga codsi qaarad gooniya oo webka ka mida u yeela
Dahir yaa shamis bay sii socota marka akhyaarta waad maraqsan tihiin halkaa kaga sii hyya
Qeybta 9aad haweey sxb